Ilhaan Cumar oo markale loo haysto hadalo ay qortay – Idil News
Ilhaan Cumar oo markale loo haysto hadalo ay qortay
Posted By: Jibril Qoobey April 23, 2019
COPENHEGEN(IDILNEWS).Gabadhan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ugu firfircoon ee ka tirsan xisbiga Dimuqraaddiga Mareykanka.
Doorashadii Ilhaan Cumar!!
Ilhaan Cumar ayaa kusoo baxday doorashadii xilliga dhexe ee bishii Nofembar
Ilhaan iyo Yahuud nacaybka?
Ilhaan Cumar iyo weerarradii 9/11?
Ilhaan ayaa marar badan lagu dhaliilay qoraallo ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka
Stephen Miller waa “waddani caddaan ah”
Ilhaan Cumar ayaa Twitter ku soo qortay hadal ka dhan ah la taliyaha uu aadka u aaminsan yahay Madaweyne Trump ee lagu magacaabo Stephen Miller. Waxay ku eedeysay